डाक्टर बन्न छोडेर हिमाल खोज्दै हिँडे आङछिरिङ | tour Khabar
उहाँलाई पूर्वमा कञ्चनजंघादेखि पश्चिममा अपि सैपालसम्मको सबै हिमालको नाम कण्ठस्थ छ । कुन हिमालको के विशेषता छ, कुन हिमाल आरोहणका लागि सहज छ, कुन छैन, सबै मुखाग्र बताउन सक्ने अद्भूत क्षमता पनि छ उहाँसँग । उहाँ भन्ने गर्नुहुन्छ – ‘मलाई फोटो देखाउनुस् र सोध्नुस् म सहजै भनिदिन्छु फोटोको हिमाल कुन हो ? कति उचाइको हो ?’
समुद्री सतहदेखि करिब तीन हजार ७९० मिटर उचाइमा रहेको खुम्जुङ गाउँमा ‘ओम मणि पद्यमे हुँ’ को बुद्धवचन गुन्जिइरहन्छ । खुम्जुङबाट शेर्पाहरू एक दिनमा सजिलै हिँडेरै सगरमाथाको आधार शिविर पुग्छन् ।
बुबा कुनछुम्बी शेर्पा र आमा कलि शेर्पाका तीन दिदीबहिनी र तीन दाजुभाइका जेठो छोरा आङछिरिङ । जेठो भएपछि व्यावहारिक जिम्मेवारी पनि बढी नै हुने भयो । तेञ्जिङ नोर्गे शेपा खुम्जुङ निवासी नै हुनुहुन्थ्यो । कुनछुम्बीको असाध्यै मिल्ने साथी । उहाँ हिलारीको पनि उस्तै मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो । ‘उहाँहरूको प्रेरणाबाटै पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने मौका मिल्यो,’ सुदूर विगतको स्मरण गर्दै शेर्पाले भन्नुभयो ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मान्छे न्यून उचाइमा जाँदा समस्या भयो । निकै बिरामी पर्नुभयो । रोगी डाक्टर हुनुभन्दा स्वस्थ मान्छे बनेर बस्नु राम्रो हुन्छ भन्ने त्यहाँका प्रोफेसरको सुझाव मानेर उहाँ स्वदेश फर्कनुभयो । फर्केर आएपछि उहाँ भिनाजु दावा नोर्बु शेपाको साथले पर्यटन व्यवसायमा जोडिनुभयो । ‘नयाँ मान्छे भेटिने, मिठो खान र लाउन पाइने भएकाले मलाई त्यसैले पो तान्यो कि ?,’ शेर्पाले भन्नुभयो ।
‘भरियाहरू ठोसे खोलामा पछारिए, भारी बगायो, बाबु र काका असाध्यै हतास देखिनुहुन्थ्यो, कारण के थियो, मलाई पनि थाहा थिएन, भोलिपल्ट भारी खोज्दै जाँदा चार किलोमिटर तल फेला पर्‍यो,’ उहाँ सुनाउनुहुन्छ – ‘हराएका पाँच भारीमध्ये दुई भारी पैसाको थियो । त्यतिखेर ठूला नोट थिएनन् । सिक्का थियो । एक पैसा, पाँच पैसा र एक रुपैयाँका नोट मात्र पाइन्थे । पैसा बोक्न नै भरिया लैजानु पर्ने वाध्यता थियो । पैसा फेला परेपछि बुबा र काका धेरै खुशी हुनुभयो ।’
यो स्मरण धेरै पछि मात्रै बुबाको मुखबाट उहाँले सुन्नुभयो । पढ्न लेख्न जान्ने भएकाले आङछिरिङको जिम्मा बुबालाई सघाउने थियो । ‘कुन भारी कहाँ के अवस्थामा छन् लेखाजोखा गरेर बुबालाई सघाउँथें,’ उहाँले भन्नुभयो – ‘त्यतिखेर शेर्पा भरियाले दैनिक रु ३ ज्याला पाउँथे । अहिले दैनिक करिब रु एक हजार ८०० देखि दुई हजारसम्म पाउँछन् ।’
हेर्दाहेर्दै इम्जा तालको सतह बढ्यो । जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढायो । हिमनदीहरू फैलँदै गयो, पग्लदै गयो । भावी सन्ततिलाई हिमाल र हिमनदी देखाउन नपाइएला भन्ने ठूलो चिन्ता छ शेर्पालाई ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘त्यतिखेर इम्जा ताल सानो पोखरीजस्तो थियो । त्यही हिमनदीमाथि नै हामीले क्याम्प बनाएका थियौं । तर सन् २०१४ मा जापानको कियो विश्वविद्यालयको एक समूहले पुनः इम्जा तालको अध्ययन गर्‍यो । सो अध्ययनले तालको लम्बाइ तीन किलोमिटर र चौडाइ १४२ मिटर गहिरो भएको निष्कर्ष निकाल्यो । यो जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारेको असरको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।’
सन् १९९६ मा नेपालका हिमनदीहरू तीन हजार आसपास थिए । इसिमोडकाअनुसार अहिले हिमनदीहरू बिलाएर दुई हजार ३१५ वटामा खुम्चिएका छन् । त्यसमध्ये १०० वटा हिमताल फुट्ने जोखिममा रहेको बताइन्छ । त्यसमा इम्जा हिमताल पनि पर्छ ।
त्यस्ता ताल फुटेमा २०७२ सालको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति भन्दा ठूलो क्षति नेपालमा हुने विज्ञहरू बताउँछन् । तालको दीर्घकालीन र अल्पकालीन रूपमा समयमै व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएको ठान्नुहुने उहाँलाई नेपालका हिमाललाई कसले जोगाइदिन्छ होला भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ ।
जिन्दगीको पहिलो कमाइको राम्रैसँग सम्झना छ उहाँलाई । ‘पहिलो पटक ‘ल्होत्से स्याड’को आधार शिविरसम्म गएर रु १२५ कमाएँ, त्यो मेरो पहिलो कमाइ थियो’ उहाँले भन्नुभयो – ‘मेरो ज्याला रु ७० मात्रै भएपनि पाहुनाले बक्सिस दिएका थिए ।’
पहिलो कमाइ कसलाई दिनुभयो त ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो – ‘कसलाई दिनु नि ! आमालाई दिएँ ।’ आमाले रु १० पकेट खर्च भनेर दिनुभयो । त्यतिबेला जापानी लिभाइस पाइन्टको राम्रै फेसन चलेको र जापानीहरूले ल्याइदिने गरेको स्मरण पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।
गाउँघरका सबै शेर्पा दाजुभाइ आरोहणमा निस्कन्थे । अंग्रेजी जानेको मान्छेको माग बढी हुन्थ्यो । उहाँलाई विदेशीसँगै गएर हिमाल अध्ययन गर्ने राम्रै मौका मिल्यो । त्यसले उहाँलाई विज्ञकै रूपमा स्थापित गरिदियो । प्रत्यक्ष रूपमै हिमालको अध्ययन गर्न पाएको मौकाले नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै हिमाल तस्वीर हेरेरै चिन्न र र वर्णन गर्नसक्ने हुनुभयो उहाँ । उहाँ भन्नुहुन्छ – ‘धेरै त होइन नेपालका ९० प्रतिशत हिमालको जानकारी दिनसक्छु भन्ने लाग्छ मलाई ।’
विश्व तापमान र जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी उच्च हिमाली क्षेत्रमा देखिएको छ । ‘मेरै अनुभवले पनि के भन्छ भने धेरैजसो हिमालमा हिउँ पर्नै छाडे, परेपनि लामो समय अडिँदैन, कसलाई दोष दिने ? सरकार र सरोकारवाला सचेत हुनुपर्छ,’ शेर्पाको आग्रह छ ।
सन् २०१६ मा इसिमोडले गरेको एक अध्ययनअनुसार सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रूपमै २ डिग्री तापक्रम बढ्ने देखिएको छ । त्यसले हिमालको हिउँ पगाल्ने निश्चित प्रायः छ । छिमेकी देशको तीव्र औद्योगिकीकरणले गर्दा धुँवाको प्रत्यक्ष असर उच्च हिमाल भेगमा पर्ने गरेको छ ।
‘छिमेकी मुलुक चीनले विश्वका सबैभन्दा अग्ला आठ वटा हिमाल हामीसँग छन् भनेर प्रचार गर्छ, हामीले पनि १४ वटा छन् भनेर प्रचार गर्न सके विश्वभरका पर्यटकलाई थप आकर्षण गर्न सकिन्छ,’ शेर्पाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सगरमाथाको टुप्पोमा बस्नलायक मनमोहक स्थान छ जुन नेपालको हो । यहाँ आरोही खुशीले उफ्रन्छन् र तस्वीर खिच्छन् ।
उहाँका अनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि चीनतर्फको बाटो धेरै लामो पर्छ । नेपालबाट चाहिँ बाटो छोटो भएपनि हिमनदीको मार्ग निकै गाह्रो छ । चीनतर्फबाट कम्तीमा दुई महिना लाग्छ आधार शिविरदेखि चुचुरोसम्म पुग्न । नेपालतर्फ ठाडो बाटो हिँड्नुपर्छ भने चीनतर्फबाट घुम्तीको यात्रा गर्नुपर्छ । चीनतर्फ आधार शिविरसम्मै सडक सञ्जाल पुगेको छ ।
दुर्घटनामा परेर मृत्यु भयो भने शेर्पा समुदायको काजक्रिया महंगो हुन्छ । ‘अहिले एक आरोही तलमाथि भए बीमा बापत रु १५ लाख पाउँछ तर, काजक्रिया गर्दा ७ लाख बढी खर्चनु पर्छ,’ शेर्पा समुदायको मृत्यु संस्कारको यथार्थ सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो ।
आरोहण शारीरिक दृष्टिले अत्यन्तै कठिन पेशा भएकाले उमेर अनुसार शेर्पाको महत्व हुन्छ । धेरै विदेशी आरोहीले कम उमेरका पथप्रदर्शक खोज्छन् । आरोहीले ४०/४५ वर्षमै अवकाश लिनुपर्छ । आफूहरूले सरकारसामु शेर्पा समुदायको सामाजिक सुरक्षाको माग धेरै पहिलेदेखि राख्दैआएको तर हालसम्म पूरा नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
शेर्पा समुदायले दुःख गरेर आरोहीलाई हिमाल आरोहण गराउँछन् तर उनीहरूको नाम कहिल्यै बाहिर आउँदैन । यो प्रवृत्तिप्रति उहाँको गुनासो छ । सन् १०१४ मा सगरमाथा आधार शिविरमा हिमपहिरो गएर १३ जनाको मृत्यु भयो । यो दुखान्त घटना सम्झँदै उहाँले भन्नुभयो – ‘नौ दिनमा नौलो, बीस दिनमा बिस्र्यो भने जस्तै भयो ।’
पर्यटनमा परेको वातावरणीय प्रभावलाई सुधार गर्न केही गर्न पाए हुन्छ भन्ने सोच राख्नुहुन्छ उहाँ । नेपालको पर्वतारोहणलाई बाहिरी विश्वसामु चिनाउने व्यक्तिको नाम लिँदा उहाँ आङरिता शेर्पा (हिमचितुवा), स्व आक्पा शेर्पा र दावा नोर्गु शेपाको नाम स्मरण गर्नुहुन्छ र स्व डा हर्क गुरुङ र ब्रिटिस नागरिक माइक चेनीलाई उहाँ आफ्नो प्रेरणाका स्रोत मान्नुहुन्छ । रासस